ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Newark, ဂျာစီစီးတီး, Paterson, အဲလစ်ဇဘက်, NJ
Newark ရန် - မှစ. တတ်နိုင်ဇိမ်ခံကားပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, ဂျာစီစီးတီး, Paterson, အဲလစ်ဇဘက်, NJ လေယာဉ်လေယာဉ်ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးငှားရမ်းမှုကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 877-231-8999 စီးပွားရေးအဘို့အချည်းနှီးသောခြေထောက်ယင်ကောင်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
သငျသညျနယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သင့်ထံမှသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ, ဂျာစီအသစ် ဧရိယာ '' တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၏ဗလာပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနေတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွက် chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အောက်တွင်သင့်အနီးဆုံးမြို့ထွက် Check.
Bayonne, NJ အက်ဒီဆင်, NJ Newark, NJ Trenton, NJ
Bloomfield, NJ အဲလစ်ဇဘက်, NJ Passaic, NJ Woodbridge, NJ
ကန်ဒန်း, NJ Irvington, NJ Paterson, NJ ပြည်ထောင်စုစီးတီး, NJ
Clifton, NJ ဂျာစီစီးတီး, NJ ပါ့သ Amboy, NJ Vineland, NJ
အရှေ့လိမ္မော်ရောင်, NJ နယူး Brunswick, NJ Toms မြစ်, NJ ဝိန်း, NJ
ကျနော်တို့ Newark မှာအမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူဂျက်လေယာဉ်ကွင်းတည်နေရာများစာရင်း, ဂျာစီစီးတီး, Paterson, အဲလစ်ဇဘက်, သငျသညျအနီးအာကာသလေယာဉ်ပျံလေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် NJ ဧရိယာ
အတ္တလန္တိတ်စီးတီး ACY ACY KACY အတ္တလန္တိတ်စီးတီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် P-S က 534,204
Trenton TTN TTN KTTN Trenton မာလေဆိပ် P-N ကို 148,256
Newark EWR EWR KEWR Newark Liberty အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် P-L ကို 17,514,139
Morristown MMU MMU KMMU Morristown စည်ပင်သာယာလေဆိပ် R ကို[NB 1] 729
Teterboro TEB TEB KTEB Teterboro လေဆိပ် R ကို 6,725
Belmar / Farmingdale BLM BLM KBLM Monmouth အလုပ်အမှုဆောင်လေဆိပ် (Allaire လေဆိပ်ခဲ့သည်) R ကို 68
ဝဲလ် CDW CDW KCDW Essex ကောင်တီလေဆိပ် R ကို 14
လင်ကွန်းပန်းခြံ N07 လင်ကွန်းပန်းခြံလေဆိပ် R ကို
Linden LDJ LDJ KLDJ Linden လေဆိပ် R ကို 8
Manville 47N ကို JVI ဗဟိုဂျာစီဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် R ကို
တောင်ပေါ်က Holly ခြေးယူ LLY Kwai တောင်ပိုင်းဂျာစီဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် R ကို
Princeton / ကျောက်တောင်ဟေးလ် 39N ကို ရာခိုင်နှုန်း Princeton လေဆိပ် R ကို 6
Readington N51 Solberg-Hunterdon လေဆိပ် R ကို
Robbinsville N87 Trenton-Robbinsville လေဆိပ် R ကို 2
Somerville SMQ KSMQ Somerset လေဆိပ် R ကို 9
Sussex FWN KFWN Sussex လေဆိပ် R ကို
Hammonton N81 Hammonton စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Lakewood N12 Lakewood လေဆိပ် GA
Millville MIV MIV KMIV Millville စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 6
သမုဒ်ဒရာစီးတီး 26N ကို သမုဒ္ဒရာစီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 2
Toms မြစ် MJX MJX KMJX ရောဘတ်ဂျေ. Miller ကလေတပ်ပန်းခြံ GA
အနောက် Milford 4N1 Greenwood ရေကန်လေဆိပ် GA
Wildwood WWD WWD KWWD ကိပ်မေလလေဆိပ် (ကိပ်မေလကောင်တီလေဆိပ်) GA 13
Woodbine Obi အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ Woodbine စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Andover 12N ကို Aeroflex-Andover လေဆိပ် (Aeroflex-Andover ဖျော်ဖြေမှု)
Andover 13N ကို Trinca လေဆိပ်
ဘာလင် 19N ကို ကန်ဒန်းကောင်တီလေဆိပ် 1
Blairstown 1N7 Blairstown လေဆိပ်
Bridgeton 00N ကို နှစ်ကောင်လေဆိပ်
လက်ဝါးကပ်တိုင်သော့ချက်များ 17N ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်သော့ချက်များလေဆိပ်
Hackettstown N05 Hackettstown လေဆိပ်
Jobstown 2N6 Redwing လေဆိပ်
Little ကကြိုပို့ယာဉ် 2N7 Little ကကူးတို့ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း
Lumberton N14 ပျံ W ကလေဆိပ်
နယူတန် 3n5 နယူတန်လေဆိပ်
အဟောငျးတံတား 3N6 ဟောငျးတံတားလေဆိပ်
Pedricktown 7N7 လေယာဉ် Aerodrome (ဟောငျး Mans လေဆိပ်ခဲ့သည်)
Pittstown N85 အာလေဇန္လေဆိပ် (အာလေဇန္ဖျော်ဖြေမှု)
Pittstown N40 က Sky Manor လေဆိပ်
Vincentown N73 အနီရောင်ခြင်္သေ့လေဆိပ်
Vineland 29N ကို Kroelinger လေဆိပ်
Vineland 28N ကို Vineland-Downstown လေဆိပ်
အနောက်အဘိဓါန် Creek 31E ကို ရွှေလင်းတသိုက်လေဆိပ် 2
Williamstown C01 တောင်ပိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်လေဆိပ်
Lakehurst IN IN KNEL NAES Lakehurst (Maxfield ဖျော်ဖြေမှု)
Wrightstown WRI WRI KWRI McGuire လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း 9,851
Flemington NJ29 ဘရက်ဖို့ဒဖျော်ဖြေမှု
Pemberton 3NJ1 Pemberton လေဆိပ် (အများပြည်သူသုံးစွဲသည်အထိ 2006, FAA ခဲ့သည်: 3N7)
Asbury ပန်းခြံ ကာကွယ်မှု Asbury Park က Neptune လေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 1977)
အတ္တလန္တိတ်စီးတီး z z Khaiya အတ္တလန္တိတ်စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် (Bader ဖျော်ဖြေမှု) (ပိတ်သိမ်း 2006)
Bridgeton N50 လီ Calzi လေဆိပ် (Calzi AIRPARK ကြောင်း) (ပိတ်သိမ်း 2011?)
Matawan 2N8 မာလ်ဘိုရိုလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2002)
Pennington N75 အမွှာထင်းရူးလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2008)
Princeton N21 Forrester လေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 1989?)
Vineland 25N ကို ကရူရဲ့လေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2005)
Williamstown 80N ကို Piney Hollow လေယာဉ်ကွင်း (ပိတ်သိမ်း)
Newark အတွက်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာ, ဂျာစီစီးတီး, Paterson, အဲလစ်ဇဘက်, NJ ထိပ်တန်းညပွဲလမ်း, ငါ၏အဧရိယာတဝိုက်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝဲ | အလုပ်အမှုဆောင်ဂျက်စင်းလုံးငှား Newark